Mamelana miaraka amin’ny tsoraka fanamarihan-takila ny Lingua Esperanto · Global Voices teny Malagasy
Mamelana miaraka amin'ny tsoraka fanamarihan-takila ny Lingua Esperanto
Voadika ny 16 Septambra 2019 16:10 GMT
Vakio amin'ny teny Esperanto , Română , Español, Ελληνικά, Italiano, Français, English
Sary avy amin'i Clément Baleyte.
Mirehareha amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny fianakaviamben'ny Global Voices nanomboka tamin'ny 2013 ny Global Voices Esperanto. Amin'ny maha rantsana Lingua tokana izay mifototra amin'ny teny noforonina iraisam-pirenena azy, sady manolotra ny toetra manokany sy ireo fanambinà vondrom-piarahamonina erantany ahitana mpandray anjara sy mpamaky azy ny Lingua Esperanto. Faly izahay mampiroborobo ny resaka eny an-toerana sy erantany , indrindra ao anatin'ny taona iray natao hankalazana ny fahasamihafana ara-teny sy ara-kolontsaina.
Na izany aza, tsy maintsy hatao maharitra tanteraka ny asanay. Ahoana no hahafahanay, hahatratrarana izany tanjona izany, mampahafantatra ny Global Voices Esperanto?
Namaly izany fanontaniana izany ireo mpandika tenin'ny Lingua Esperanto, i Manuela Burghelea sy i Herman Dekeŭnink, tamin'ny fandaminana ny famokarana ireo tsoraka fanamarihan-takila famafy, izany hoe, tsoraka fanamarihan-takila misy voa afaka ambolena, ho toy ny fomba fisaorana ireo mpandray anjara efa misy, fanaovana dokambarotra ho an'ilay tranonkala, ary hisintonana mpandray anjara vaovao. I Clément Baleyte, mpirotsaka an-tsitrapo ao amin'ny TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), fikambanana Esperanto tanora miorina any Rotterdam no nanao ny endrik'ireo tsoraka fanamarihan-takila ireo, izay natao mba hanehoana ny firotsahan'ny Global Voices amin'ny fampiroboroboana ireo teny teratany. Avy eo, nataon'ny orinasa Neerlandezy teny an-toerana printy ilay taratasy nisy voa, izay nahitana voana voninkazo “aza adino aho” (Myosotis) mba hanomezana antoka fa velona lalandava ireo feo sy ireo lova ara-teny rehetra.
Nomena ireo mpandray anjara rehetra tamin'ireo hetsika Esperanto lehibe roa natao tamin'ity taona ity ireo tsoraka fanamarihan-takila: Ny Kaongresy Manerantanin'ny Esperanto (Lahti, Finnland, 20-27 Jolay) sy ny Kaongresin'ireo Tanoran'ny Esperanto (Liptovský Hrádok, Slovakia, 28 Jolay-4 Aogositra), izay samy nampiantrano fanolorana mikasika ny asan'ny Global Voices miaraka amin'ny teny teratany avokoa. Nomena tamin'izany ny topimaso voalohany tamin'ny kabarin'ireo mpikatroka ho an'ny teny, izay nifototra tamin'ny fandikana ho amin'ny teny Esperanto. Navoaka tao amin'ny gazetin'ny kaongresy ny tafatafa fanadihadiana iray niarahana tamin'ny Global Voices ary noraketina am-peo ny tafatafa iray hafa ho an'ny podcast Esperanto.
Sary avy amin'ny Clément Baleyte.
Amin'ity Taonan'ny Teny Teratany ity, mpiara-miombonantoka ofisialy amin'ny fampielezana ny feon'ireo mpikatroka ho an'ny teny teratany ny Global Voices. Iray tamin'ireo rantsana navitrika indrindra tamin'ity hetsika fanentanana ity ny Lingua Esperanto, nandika tafatafa niarahana tamin'ny tomponandraikitr'ireo hetsika fanentanana maro teo amin'ny Twitter @ActLenguas, @DigiAfricanLang, @NativeLangsTech sy @AsiaLangsOnline. Jereo ireo lahatsoratra rehetra nadika ho amin'ny teny Esperanto ao amin'ny Global Voices Esperanto, lohahevitra “Indiĝenoj”.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 23 ora izay